University of Lubeck - Hel Waxbarashada Sare ee Germany, Europe
University of Lubeck Details
City : Lubeck
gaabinta : EL
aasaasay : 1964
Ardayda (qiyaastii.) : 4000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Lubeck
Qor at University of Lubeck
In 1973, Jaamacadda Lubeck noqday hay'ad madax banaan sayniska ee gobolka of Slesvig-Holsten. Waxaannu bixinnaa barnaamijyada degree in daawo, sayniska kombiyuutarka, injineernimada, iyo sayniska dabiiciga ah. Barnaamijyada iskujir koobay cilmiga dabiiciga ah, sayniska kombiyuutarka, iyo daawo bixiyaan wax ku ool ah oo kor u-to-date waxbarashada ay xoojinayaan tiro heerka ugu sareeya ee daryeelka caafimaadka. halkan shuruudaha loogu talagalay horumarinta iyo codsanaya teknoolajiyada cusub, Baadhista xanuunada, iyo daaweynta ku haboon yihiin, iyadoo ay sabab u wada shaqayn ka mid ah kulliyadaha, oo la kaashanaysa hay'adaha kale ee Lübeck, Xarunta Cilmi-baarista ee Borstel, Laser Xarunta Caafimaadka, iyo ganacsiyada maxaliga ah. Jaalka-up la machadyada cilmi-qaran iyo mid caalamiba bolsters tayada cilmi at our jaamacad, hadda lagu qeexay laba beeraha gaar ah oo cilmi-.
Marka la barbar dhigo jaamacadaha kale, Jaamacadda Lubeck waa yar yahay, kaliya 3,400 ardayda - laakiin faanaa wanaagsan ratio macallin-arday. The kala horeynta sare ardayda sayniska kombiyuutarka iyo daawo our xariiqaysa heerka sare ee cilmiga iyo waxbarashada.
Ma damaanad ay madaxbannaani gobolka. Tani waxay ku baaqeysaa in is-maamul-, fulinta cilmi fiican on baaxadda caalami ah, bixinta waxbarashada dalbanayaan, dhiirinta tacliinta dhallinyarada ah, iyo hubinta shaqaalaha si sax ah u qalma. Waxaan gaaro kuwaas oo gool loo marayo barnaamijyo kala duwan oo ku lug leh Caqlina daawo, cilmiga dabiiciga ah, iyo sayniska kombiyuutarka / injineernimada.
Waxaan ku siin daryeelka adeeg buuxa bukaanada ee our rugta.
iyo xubnaha la xiriira iyo hay'adaha:
Samee cilmi aasaasiga ah ee cusub iyo aqoon-kaxayso tiro balaadhan oo ah codsiyada;
Sii wajiyo badan, horumarsan, waxbarashada cilmi ku salaysan aasaasay on aragti, hab nidaamsan oo didactically si fiican loo habeeyay si ay u dhisaan buundo dunida dhabta ah, oo si joogto ah dib u eegi kuwan;
Diririn, waayo, dib u habaynta adag oo ka socda dhammaan barnaamijyada degree iyo simistar, si loo abuuro iyo horusocodka waxbarashada cusub;
Shaqee machadyada cilmi-baarista iyo ganacsatada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, gaar ahaan kuwa ku saleysan ee gobolka;
Ma umadeed iyo kuwa caalamiga janjeedha oo tartan;
Qorsheyso masuuliyad mustaqbalka by ballaarinta jaamacadda, kulliyadaha iyo rugta, iyo xoojiyo muhiimadda;
Hubi in heerka ugu sareeya ee tayada adeegyada oo dhan;
Istaag, waayo, dulqaad iyo is dhexgalka masuul ka mid ah dhammaan kooxaha jaamacadda iyo mabaadi'da sinnaanta, gaar ahaan ragga iyo haweenka dhexdooda, iyo dadaal ah si ay u gutaan, kuwaas oo;
Dhiirri-galiya xubnahooda in ay qaataan masuuliyadda;
Create a jawi pro-qoyska iyo qaabka ay si wanaagsan isku hagaajiyaan waxbarashada iyo xirfadaha shaqo iyo nolosha qoyska;
Act ee mas'uul ka ah, dhaqaale, iyo hab awoodda si ay u isticmaalaan khayraadka dhiibay iyaga daryeelka iyo in hab deegaanka-friendly.
Barnaamijyada Degree baray in English
Barnaamijyada Degree baray in Jarmal
Sayniska Nolosha xisaabeed
Ganacsi ee Technologies Digital
Kelli Life Science
1912 Xarunta Daryeelka Strecknitz Daaweynta iyo
ka dib 1945 City Hospital East
3. November 1964 Academy of Medicine of Lübeck (2nd Kuliyada Daawada of University ee Albrechts Christian of Kiel), semester caafimaad ee barnaamijka shahaadada daawada
7. Laga yaabaa 1973 School of Medical Lübeck
1979 Preclinical Kuliyadda Sayniska Dabiiciga ah (maanta: Caqlina Computer Science / Engineering iyo Sciences Dabiiciga ah), ee ardayda simistarka pre-caafimaad ee ay barnaamijka shahaadada caafimaadka
10. Laga yaabaa 1985 University Medical of Lübeck
WS 1993/94 barnaamijka shahaadada Sayniska Kombiyuutarka
WS 2001/02 barnaamijka shahaadada Baarusta kelli (hadda: Kelli Life Science)
29. dheeraad ah 2002 University of Lübeck
WS 2007/08 barnaamijka shahaadada xisaabeed Life Science
barnaamijka shahaadada Medical Science Engineering
Ma rabtaa wada hadlaan University of Lubeck ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University of Lubeck on Map
University of dib u eegista Lubeck
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Lubeck.